एक रुपैयाँमै एक किलो गोलभेडा!
आजको महंगो जमानामा कसले सोच्न सक्छ एक रुपैयाँमा कुनै तरकारी पाइन्छ भनेर? तर याे साँचाे हाे। काठमाडौंको अनामनगरमा अवस्थित एक तरकारी बजारमा भने एक रुपैयाँमै एक किलो गोलभेडा पाइन्छ।
अनामनगरस्थित तरकारी बजारका संयोजक नव श्रेष्ठले शनिबारबाट एक रुपैयाँमा एक किलो गोलभेडा पाइने बताए। तर त्यसका लागि बजारकाे शर्त छ। २ सय रुपैयाँमा अन्य तरकारी किन्दा १ किलाे गाेलभेंडालाई १ रुपैयाँमात्र तिरे पुग्छ।
श्रेष्ठकाअनुसार तरकारी बजारको शनिबार उद्घाटन हुँदैछ। त्यसको एक सातासम्म साे सर्तअनुसार एक रुपैयाँमा गोलभेडा खरिद गर्न सकिने उनले सुनाए।
'अहिले बजारमा गोलभेडाको मूल्य ४० रुपैयाँ छ', उनले भने, 'अरु तरकारीमा पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाइनेछ।' नागरिकको मागलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो तरकारी बजार स्थापना गरिएको श्रेष्ठले बताए। तरकारी बजार बिहान ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म खोलिनेछ।
यो तरकारी बजार एक रोपनीमा बनाइएको छ। जसमा ३० स्टल रहेका छन्। यहाँ तरकारी बजारको साथसाथै खाजा, किराना, रेष्टुरेन्टसम्म संचालन हुने श्रेष्ठले बताए।